कहिले राइज-आर्टविन एयरपोर्ट खुल्नेछ? | RayHaber
घरटर्कीकालो सागर क्षेत्र08 आर्टिनरेज-आर्विभन विमानस्थल कहिले खोलिनेछ?
रेज-आर्विभन विमानस्थल कहिले खोलिनेछ?
14 / 02 / 2019 08 आर्टिन, 53 रेजिज, साधारण, विमानस्थलको, कालो सागर क्षेत्र, राजमार्ग, HEADLINE, टर्की
Rize Artvin हवाई अड्डा कहिले आउनेछ? 1
परिवहन र पूर्वाधार मन्त्री Mehmet Cahit Turhan, Rize र Artvin 2022 Havalimanı`N को सम्झौता अवधि समाप्त अनुसार कि बताउँदै "तर कर्मचारीहरु को संख्या यो परियोजना सेवाहरू सुरु गरिनेछ वृद्धि आवश्यक उपाय, चालक, उपकरण, मशीनरी, वाहन, वर्ष 2020 को अन्त लिएर।" उहाँले भन्नुभयो।
राइजको दायराभित्र रहेको विभिन्न कार्यक्रमका मन्त्री तुर्हानले, पाजार जिल्लाले व्यापारीसँग कुराकानी गरे।
त्यसपछि, राइज - आर्टविन एयरपोर्टको निर्माण स्थलमा परीक्षा गर्ने टुरहानले अधिकारीहरूबाट कामको बारेमा जानकारी प्राप्त गरे।
तुरहानले अनुसन्धान पछि भने, यो समुद्रमा निर्माण गरिएको दोस्रो एयरपोर्ट हो, उनले भने।
एयरपोर्टको लागत लगभग2अरब तुर्की Liras हो भनेर बताउँदै, तुर्हान निम्नानुसार जारी रह्यो:
एकीप हाम्रो टोली 2020 को अन्तमा एयरपोर्ट खोल्न लगनशीलताका साथ काम गरिरहेका छन। सम्झौताका अनुसार एक्सपायरी समय एक्सएनयूएमएक्स हो तर आवश्यक कदम चालेर हामी टोली, उपकरण, मेसिनरी, सवारी साधन र कर्मचारीहरूको संख्या बढाउँदै 2022 को अन्त्यमा सेवामा यो परियोजना खोल्नेछौं। यी हाम्रो क्षेत्र हुन्, यातायात पूर्वाधार जुन मानिसहरूलाई चाहिन्छ। यो यस क्षेत्रको विकासशील अर्थव्यवस्था र पर्यटनको महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार हो। एयरपोर्ट एक यातायात प्रणाली छ कि मानिसहरूले यातायात मा रुचि छ।
तुर्हानले भने कि उनीहरूले इस्तानबुलमा विश्वको सब भन्दा ठूलो एयरपोर्ट निर्माण गरे र यसलाई 42 को रूपमा खोले। ती मध्येका केहीले यी सम्मानित प्रोजेक्टहरू लुक्नका लागि केहि पुनरावेदनहरू, वक्तव्यहरू र स्पष्टीकरणहरू गर्छन्। तिनीहरूको आदर गरिनु हुँदैन। ”
तुरहानले जोड दिए कि उनीहरूले आफ्ना प्रतिज्ञाहरूलाई समयमै पूरा गर्न सबै आवश्यक कदम चालेका छन्।
मन्त्री तुर्हान, इस्तानबुल एयरपोर्ट, भने:
“यी श्रोतहरू हुन् जुन सार्वजनिक स्रोतहरूको प्रयोग बिना देशलाई यस देशको शक्ति, creditण र स्थिरताको परिणामका रूपमा बनाइन्छ। केहि झूटा समाचारहरू जस्तै 'यी सेवाहरू राष्ट्रलाई दिइनेछ, यो हुनेछ,' आउँदछ। उनीहरूलाई आदर गरिनु हुँदैन। यो एयरपोर्ट एक निजी लगानीकर्ता कम्पनीले बनाएको बिल्ड-अपरेट-ट्रान्सफर परियोजना हो, जुन सञ्चालनका लागि खोलिएको छ र जुन सरकारलाई वार्षिक भाडा 822 मिलियन यूरोको साथ तिर्ने छ। त्यहाँ आय साझेदारी पनि छ, विशेष गरी यदि अन्तर्राष्ट्रिय यात्रीहरूको संख्या सम्झौतामा तोकिएको संख्या भन्दा बढी छ। ”
रेज-अर्टिन एयरपोर्ट अप्रिलमा सुरु भएको छ
रेज-आर्विभन एयरपोर्टको आधारमा समारोहमा राखिएको थियो
Rize-Artvin Airport Airport 2020 मा उडानको लागि तयार हुनेछ
Erdoğan गर्न Rize-Artvin एयरपोर्ट निर्माण ...
रेज-आर्विभन एयरपोर्टमा नयाँ रेकर्ड
40 प्रतिशत Yüzde मा आर्टविन एयरपोर्ट परियोजना राइज गर्नुहोस्
राइज-आर्टविन प्रान्तहरूमा इमल्सन प्रयोगको लागि ...
इस्तांबुल एयरलाइन्सले आर्टिनमा उडान गर्नेछ
आर्टिन केबल कार परियोजनाको उत्साह
डीएसआईले आर्टविनमा 216 किलोमिटर टनेल र 27 किलोमिटर टनेल निर्माण गर्नुभयो
साल्हा सुरंगलाई रेजिजको शहरी परिवर्तन
इजमिरको नयाँ स्क्वायर खोल्छ